Umphefumlo Ubongoza Ukubala Ukubala | Iintsingiselo kunye nokuFunda - Ukubhula Ngamanani
Umphefumlo Wokubongoza Inombolo yokubala
Faka igama lakho elipheleleyo ekuzalweni ukubala inombolo yomphefumlo wakho wokukhuthaza kwaye ufumanise ukuba kuthetha ntoni.
Faka igama lakho elipheleleyo ekuzalweni ukubala inombolo yakho yomphefumlo:
wenza ntoni umntu we-sagittarius xa ekuthanda
Bala Inani Lomphefumlo Wakho Wokubongoza
Inombolo yakho yomphefumlo ikhuthaza
Yintoni iNombolo yokuBongoza komphefumlo?
Kwinombolo yokubala ngamanani, umphefumlo wakho ukhuthaza inombolo (ekwabizwa ngokuba yinombolo yomnqweno wentliziyo) imele oko kuthethwa yintliziyo nomphefumlo wakho Banqwenela ngaphezu kwayo nayiphi na into kweli hlabathi. Ichaza amaphupha akho, amathemba kunye neminqweno yakho. Ityhila izizathu zakho zangaphakathi kwaye yilensi apho wenza izigqibo. Ikwalinani elibonisa indlela osebenza ngayo kubudlelwane.
Ukuba umphefumlo wakho ubongoza inombolo iyahambelana neyakho inombolo yendlela yobomi , izigqibo kuya kuba lula ukuzenza. Kodwa ukuba kukho ukungangqinelani phakathi kwabo, unokuziva ungqubana amaxesha ngamaxesha. Izigqibo kunokuba nzima ukuzenza kwaye uya kutsalwa phakathi kwentloko yakho nentliziyo yakho.
Ukuba inombolo yakho yendlela yobomi kunye nenombolo yomphefumlo wakho iyafana uya kufumana ukusebenza ngokunyaniseka okuyinyani kulula ukukwenza.
Ukufunda ngakumbi malunga nobudlelwane phakathi kwenombolo yomphefumlo wakho nenombolo yendlela yakho yobomi, cofa apha ukuze ufunde ngokufundwa kwamanani kwasimahla. Uya kufumanisa amanani akho aphambili ekubhula ngamanani.
Ungawubala njani uMphefumlo wakho wokuBongoza
1. Bhala amagama akho apheleleyo okuzalwa (kubandakanya onke amagama aphakathi) kumgca omnye umz. : EMILYJENNIFERSTONE
2. Chonga izikhamiso kwigama lakho lokuzalwa.
3. Nika isikhamiso ngasinye inani lokuvumisa ngamanani
Ndi = 9
Y = 7 (ngamanye amaxesha…)
('y' yenza ngokwahlukileyo kwezinye izikhamiso. Ngamanye amaxesha inokuba sisinxibelelanisi, ke ifuna kuphela ukubalwa kwimeko apho imela isikhamiso. Umzekelo, kwigama elithi 'Emily,' unobumba 'y' uyaqwalaselwa Ungafumana eminye imizekelo yeemeko xa u-'y 'esisikhamiso kwi Isichazi-magama seMerriam-Webster . Kufuneka uyibale kuphela ukuba ibonakala isebenza njengesikhamiso.)
4. Dibanisa onke amanani ezikhamiso phezulu
5 + 9 + 7 + 5 + 9 + 5 + 6 + 5 = 51
5. Nciphise itotali kwinani elinye
Qhubeka ukongeza izikhamiso egameni lakho, de ufumane nenani elinye. Kumzekelo ongentla 5 + 1 = 6 . I-EMILYJENNIFERSTONE linani lomphefumlo 6. Ngaphandle kwamanani aziinkosi 11, 22, kunye no-33 inani leminqweno yentliziyo yakho liya kuhlala linciphisa inani elinye. Kwakhona kubalulekile ukuba uqaphele ukuba akukho nombolo yomphefumlo oyi-10 (kuya kufuneka iyancitshiswa ibe yidijithi enye 1 + 0 = 1).
Umphefumlo Wokubongoza Inani leentsingiselo
Umphefumlo ukhuthaza inombolo 1
Umphefumlo ufuna inombolo yokuqala ibonisa ukuzimela kwaye ukwanela. Luphawu lwe inkokeli enkulu. Umntu ozithembileyo kubuchule bakhe, engoyiki ukwenza izigqibo ezinzima.
Ukuba unomnqweno wentliziyo wenombolo 1, umphefumlo wakho unqwenela ukuba yinkokeli.
Kodwa umphefumlo inombolo 1 ayikho ngaphandle kwemingeni yayo. Inkokeli eyomeleleyo ifuna umlandeli othembekileyo. Inzondelelo yakho iyosulela kwaye ukuzibophelela kwakho kukhuthaza abanye ukuba bathathe amanyathelo. Nangona kunjalo, ungangqubana nabantu abangakuthandiyo ukukhokelwa. Ukuba inombolo yomphefumlo wakho inye, unokufumana ukhuphiswano, olunokuthi lufune ukudanjiswa ngamanye amaxesha.
Umphefumlo ukhuthaza inombolo 2
Ngaba iifilimu ezibuhlungu zikwenza ulile? Ngaba uhlala ucima iindaba? Ukuba wenze izibalo ngegama lakho kunye nezikhamiso, kwaye ugqibe ngenombolo yomphefumlo oyi-2, uyi umphefumlo onovakalelo kunye neemvakalelo.
Umnqweno wakho omkhulu kukuziva ikhuselekile kwaye ikhululekile . Ngelixa ngamanye amaxesha ungabudela ubuntununtunu bakho, ngasemva kwayo kufihla i-asethi entle. Intuition yakho enamandla. Kuya kufuneka ufunde ukuyithemba, kwaye uyimele into okholelwa ukuba ilungile kuba izigwebo zakho zihlala zibonwa!
Iyintoni intsingiselo ye1010
Umphefumlo ukhuthaza inombolo 3
Ngaba utsalelekile kwiindlela zobugcisa ezibandakanya amagama? Ngaba ungumdlali weqonga, umbhali, imvumi okanye imbongi? Emva koko igama lakho kunye nezikhamiso ngaphakathi kulo mhlawumbi libhale umphefumlo wenombolo 3.
Ungu owokuzalwa osonwabisa kwaye abantu bayakuthanda ngenxa yayo.
Kodwa kuya kufuneka ufunde ukuveza iingcinga zakho ezinzulu kunye neemvakalelo zakho. Unokwenza njalo ngobugcisa. Enkosi kwiitalente zakho kunye nothando, unayo yonke into enempumelelo ebomini. Nangona kunjalo, kufuneka uzinze ngokwakho ngokusebenza nzima kunye noqeqesho ukuba ufuna ukuphumelela.
I-Ox Horoscope 2021: Ngokuqinisekileyo lo unyaka wakho
imibala yamakhandlela kunye nentsingiselo yazo
yintoni uphawu olutsha lwe-zodiac
Umphefumlo wokhuthaza inombolo 5
ukubona inombolo 4
bathini abantu abanje ebhedini